Dhacdo argagax leh oo dhex martay qoys Somaliyeed “Layaabka Soomaalida” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	4:51 pm » Magaalada Muqdisho oo 22 sano kadib lagu qabtay xuska sanad guurada ka soo wareegatay aas aaska Midowga Afrika “Daawo Sawirada” 4:28 pm » Raa’isal Wasaare Saacid oo markale si adag uga hadlay xaalada cakiran ee ka taagan Magaalada Kismaayo (Aqriso) 12:09 pm » Saraakiil ka socota Qaramada Midoobe oo maanta gaaray Magaalada Kismaayo 11:34 am » Madaxweyne Xasna Sheekh “Kaalintii aan u galnay Midowga Afrika waxay keentay, inay noo soo gurmadaan gabdho iyo wiilal Afrikaan ah” 11:20 am » Raggii ka dambeeyay dilkii Sheekh C/qaadir Gacamey oo maanta lagu xukumay xukun dil ah 9:43 am » Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Somaliya oo ku sugan Magaalada Riyadh “Daawo Sawirada” 9:31 am » Dagaal culus oo laga cabsi qabo inuu ka qarxo Magaalada Ceelbuur, markii uu gaaray Sheekh Xasan Daahir Aweys 9:23 am » Banaanbax ballaaran oo maanta markale ka dhacay Magaalada Muqdisho 8:47 am » Heshiis rasmi ah oo dhex maray Dowladaha Somaliya iyo Suudaan 6:35 pm » Wasiirkii Dastuurka oo sheegay in goor kasta ay dagaalo ka qarxi karaan Magaalada Kismaayo By: Mastar // Jun 27 2012 at 6:55 pm // 6,338 Reads // Wararka Caalamka, Wararka Somalia Dhacdo argagax leh oo dhex martay qoys Somaliyeed “Layaabka Soomaalida” Share Tweet
Dhacdadaan waa dhacdo dhab ah, ruuxii akhriyaana xaqiiqdii waxay ku noqon doontaa murug iyo amakaag. Wiilka iyo gabadha la’isku diiday ayaa waxa lagu kala magacaaba Saadaq iyo Anisa. Waxaa qadka teleefanka inagula soo xiriiray wiilkii ay dhacdadaan ku dhacday, isagoo inooga sheekeeyey sidii ay wax u dhacey, waxayna ku bilaabaneysaa
Waxaan ku dhashay magaaladda Galkacyo, sanadka markuu ahaa 1980-kii, balse waxan kusoo barbaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Dugsigayga hoose dhexe waxan kusoo qaatay isla degmada Hobyo. Halka aan dugsigayga sare kusoo qaatay magaaladda Garoowe ee gobolka Nugaal. Intii aan joogay degmada Hobyo waxaa dugsiga Qur’aanka isla dhigan jirnay Anisa oo markaas aheyd gabar aad u yar, sidoo kale aniga qudheeda waxan ahaa wiil yar. Mudo kadib markii aan dhameeyey dugsiga Qur’aanka ayay Anisa iskaga tagtay anigoo aanan garaneyn jaan iyo cirib halka ay dhigtay. Sanadkii 2001-da ayaa aniga iyo hooyaday iyo aabahay iyo wiil kale oo iga weynaa ay inoo suurta gashay inaan soo caga dhigano magaaladda Sydney ee caasimaddii hore ee dalka Australia.
Muddo kadib waxaan bilaabay inaan waxbarto, xilligaas mac-hadkii ugu horeeyey ee waxbarasho aan ka bilaabo wuxuu ahaa PARRAMATTA COLLEGE oo ku yiilay magaladda Sydney, nasiib wanaag mac-hadkaas waxaan ku arkay Anisa, waan farxay in badan, waan wada sheekeysanay, waxay i sheegtay in’ay iiga soo horeysay magaaladda.
Aniga iyo Anisa waxaa ina dhex maray jaceyl, Anisa waxay aheyd gabar aan yareynteeda isku fiicneyn, inkastoo aanan xilligaas qaan gaarin. Maanta markaan helayna waxay ila noqotay fursad aad u qaali ah. Anisa jaceylkii inaga dhaxeyey wuxuu gaaray inaan ka wada sheekeysano Mustaqbal-kayna. Waxaa go’aan buuxda ku gaarnay inaan isguursano.
Dhabtiia aniga maba garaneyn qabiilka ay ka dhalatay iyada xitaa maysan garayneyn cida aan ahay. Balse waxaanu aheyn dad is-fahmay, jaceyl dhex maray, guur-na ku heshiiyey.
Dhanka kale wiilka ila dhashay oo magaciisa la-yiraahdo Mahad ayaa wuxuu bartay gabar u dhalatay dalka India, gabadhaas oo aanan aheyn Islam iyo Christian midna, oo waxay aheyd kuwa aaminsan Diinta Hinduuga ah. 2004-tii ayuu hooyo iyo aabe u sheegay in’ay jirto gabar u dhalatay dalka India oo uu jaceyl ka dhaxeeyo. Runtii hooyo iyo aabe waa ay soo dhaweyeen. Dabayaaqadii 2004-tii ayay aqal galeyn. Arooskaas waxaa ku gacay lacag gaareyso 55 kun oo lacagta maraykanka ah ($55,000us).
2006-dii subax sabti ah ayaa Aabahay u sheegay inaan jeclahay gabar la-yiraahdo Anisa, waxaana u sheegay inaan ku heshiinay guur, bacdamaa aanu is-fahanay. Wuxuu igu yiri Anisa maxaa loogu daraa, waxaan ku iri Anisa Gutaale. Markaas buu igu yiri oday Guutaale soo maaha, kii aanu wada degneyn Hobyo oo hada inala jooga Sydney, haa baan ku iri. Waa uu iga aamusay, subixii labaad iyadoo ay tahay subax axad ah, ayuu ii yeeray iguna yiri, nin yahow i dhageyso, oday Guutaale qabiilka uu ka dhashay iyo anaga isma-gayno, oo waa dad Midgaan ah. Midgaantana lama guursado. Intaan qoslay baan ku iri aabe, waxaas majiraan oo waanu is-wada jacel nahay. Gabadha uu aabahay ku tilmaamaayo midgaan, maba jirto gabar ka qurxoon, gabar ka dabeecad fiican, ka adab badan, markaas buu lee-yahay waa midgaan, kadib wuxu igu yiri, waan ku ogahay waad madax adag-tahay, haddii aad guursatit gabadhaas, ogow imaan meysid geeridayda taadana imaan maayo, hantidaydana dhaxal kuma lihid.
Walaahi baan ku dhaartee Soomaali cid ka jaahilsan maba jirto. Waayo walaalkey waxaa lagu daray gabar Hindi ah, oo aanan aheyn Islaam, waxayna ka dhalatay kuwo dadka guba marka ay geeriyoodaan. Anigana wuxu aabe ii diidaayaa, Gabar Somali ah, Islaam ah, isku dhaqan nahay, Isku Diin nahay, war yaab-nee ee xagee u soconaa. iyadoo uu xaalka igu xun yahay ayay hooyaday igu dhahday Aabahaa hadalkiisa haddii aad diido ogow waxba nagama dhaxeeyo. Si-kastaba ha’ahaatee arintii waxan u sheegay wiil aanu Saxib aheyn, , wuxu igula taliyey inaanan isku mashquulin warka ay i leeyihiin Hooyo iyo Aabe, oo wuxu igula taliyey inaan guursado Anisa, bacdamaa aan xaq ku taaganahay, oo uusan jirin wax ladhaho Midgaan. Wiilkii aanu saxibka aheyn, ayaa i garab istaagay, waan guursaday Anisa. Waxaa dhacday in dadka aanu qaraabada aheyn ee joogay Somaliya iyo wadamada kale ee caalamka in’ay i soo wacaan, iguna yiraahdaan, “Walee Australia baa kaaga dartay, oo in lagu geeyo maysan aheyn”. Si walba oo uu xaalku yahay, waxaan kasoo guurnay magaaladda Sydney anagoo gobol kale u soo guurnay. Guurkayga waxaa kasoo wareegatay 4 sano, Hooyo iyo Aabe midna gurigayga ma-yimaado. Halka guriga walalkey ee qaba naagta Hindida ah aanan laga dhamaanin oo har iyo habeen ay dhex taagan yihiin.
Mar-mar aniga ayaa booqdo waalidkayga maadaama ay yihiin, waxayna jawaabtayda ka dhigaan, inaan salaanta la’iga qaadin, oo leela dhaqmo si’aanan fiicnayn, maalin maal-maha kamid ah ayaa Aabe igu yiri “naagta midgaanta ah ee aad qabto gabadha ay ku dhasho ninkii guursan lahaa sii diyaarso” qosol baala dhacay, waxaana ku iri, Aabe naagta midgaanta ah ee aad sheegeyso cuntada ay kariso marnaba lagama yaabo iney noqoto mid xaaraan ah. Balse mida Hindida ah lama hubo cuntada ay karineyso, maadaama ay tahay CAWAAN.
Iskusoo wada-duuboo xaaskayga Anisa hada waxay i heysaa Wiil, waxaana ugu magac-daray Axmed. Sidoo kale waxay hada i leedahay 6 bilood oo uur ah, taasina waa Mahad Alle.
Waxaana ugu baaqaayaa dhalinta Somaliyadeed, in’ay ka tagaan xumaanta ay ku dhaqmaan Somalida. Waxaana idin lee-yahay cid cid ka sareysa malaha, balse waxa lagu kala horeyaa Taqwada Ilaahay. Sidoo kale waxaan ugu baaqaayaa saxaafadda in’ay sifiican uga hadasho arrimahaan oo kale.
Sheeko qosol Badan: Labo Gabdhood oo xawaalad dhexdeeda ku ogaaday in leesla qabo kadib maxaa dhacay Qiso Xanuun badan:Jirkaaga ii hibeey ayuu i dhahay hadaad i jeceshahay ana waan isku dhiibay mana i guursan!!! Baabuur ayaan isla raacnay qacdii koowaad ayaan ku jeclaaday “Waa gabar taariikh ku dhacday” Qiso Naxdin leh: Gabar Soomaaliyeed oo Sun ucabtay maseyr ay uqaaday Ninkeeda Dumar masaeyr galay miyaan dejin karaa qisadaan waxay ku waa qiso maseyr sii Akhri Quisadaan diiniga ah waa mid mudan in lagu cibro qaato hadaba akhri oo ku cibro qaado adna Gabar Soomaaliyeed oo sheegaty in ay Doonayso In ay gaal ah oo ay la tumato Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments